Boobka Hantida Qaranka iyo Musuqmaasuqa Farmaajo, | SMC
Home WARARKA MAANTA Boobka Hantida Qaranka iyo Musuqmaasuqa Farmaajo,
Boobka Hantida Qaranka iyo Musuqmaasuqa Farmaajo,
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabnimadii jimcaha, 4:00 pm xilliga saacadda bari ee Mareykanka xariga ka jaray dhismaha cusub ee safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka.
Dhismahan oo ku yaalla Address-ka, 1609 22nd St NW, Washington, DC 20008, ayaa waxaa dhowaan iibsaday Soomaaliya, wuxuuna horey u ahaa safaaradda Columbia ee Mareykanka.
Hasa yeeshee waxaa dareen weyn shacbiga Somaliyeed geliyey arrimo dhowr ah oo is biirsaday sida:
Qiimaha gurigaan waa laga bixiyey la leeyahay oo aad uga badan qiimaha dhabta ah ee joogo guriga kan oo kale ah, xaafadaan oo kale ku yaalla iyo xeligaan oo kale ka joogo.
Guraiga waxaa lagu suuq geynayey USD 2, 702.057wax yar ka hor laba usbuuc, waxaana dadka guryaha yaqaanna ay tilmaamaan in qiimaha dhabta ah ee lagu rabay uu intaan mar waliba ka hooseeyo. Waayo qiimaha lagu suuq geeyey waxaa loogu talagalay in lagu gorgortamo. Waxaana dadka ka ganacsadaa guryaha ay leeyihiin waxaa uu ku soo dhammaan karay ila $2.5 Milyan.
Hasa yeeshee waxaa la sheegay in dowladda Somaliya ay ku iibsatay gurigaan $4,250,000 haddaba sidee labo toddobaad gudahooduu qiimahiisu ku gaaray heerkaas?
MW Farmajo oo furayey guriga ayaa sheegay in lacagta $4.2 Milyan ee laga bixiyey ay tahay lacagtii lagu ridi jiray R/Wasaarayaasha. Hasa yeeshee dowladda aan waligeed iska warqabin ma ahan wax lala yaabo in wasiirkii Maaliyadda oo isaga weligiis horsed ka ahaan jiray boobka iyo beenta wada socdaa uu sheegay in lacagta ay ka timid dalka Qatar. Waa yaabe kee been sheegaya maxaysa beenta ay shacbiga u sheegayaan uga heshiin waayeen oo been isku mid ah loo sheegi waayey. Waa heerka uu MW Farmaajo dowlad iyo hogaaminteeda ka joogo.
Dhinaca kale arrintaan waa dembi cad oo ay tahay in Madaxweynaha iyo Wasiirka Maaliyadda lagu maxkamadeeyo waayo:
MW Waxaa uu sheegay in lacagtan ay tahay lacag ay meel dhigeen haddaba sidee ayuu Madaxweynaha u sheegi karaa in lacag miisaaniyadda dowladda ka baxsan ay dowladdu u keydin kartaa iyadoon ka muuqan miisaaniyadda.
Xisaab ceynkee ah ayaa laacagtaas lagu keydiyey misa waa xisaab ay wasiirka iyo MW isla ogyihin? misa waa mid kamid ahXisaabaha Madaxweynaha ee uu hayo Axmed Dheere oo Nayroobi ka furan?
Misa xisaabta Qaranka ayey lacagtaas ku jirtay, inkastoo laga qariyey haddeyba jirto waaxda Miisaaniyadda Wasaaraadda Maaliyadda.
Guriga lacagtiisa ma la wada bixiyey misa waa deyn dib loogu dhigayo shacbiga somaliyeed iyadoo lacagtiina la qaatay?
Hantidhowraha guud ee malaga hayaa dhammaan dukumentigii loogu baahnaa gadista, lahaanshaha hantida qaranka iyo bixinta lacagtaas? Masa la marsiiyey habraacii hanti dowladeed ama lagu iibin jiray ama lagu soo iibsan jiray?
Wasiirka maaliyadda oo sheegay lacagtaas inay ka timid Qatar, caddeyn intee la’eg ayuu u hayaa? Maxay miisaaaniyadda uga muuqan weynday, haddiisa mar kale ay timid habraaca baarlamanka ee lagu maamulo lacagahaya yimaada iyadoo lagu talagelin maxaa loo marsiin waayey?
Su’aalahan iyo kuwa kale oo badan ayaa ka jira arrimaha gurigan, iyadoo xafiisyadii NewYork iyo Washington DC ay haawanayaan oo aan wax lagu shaqeeyo lahayn oo ay ahayd in haddiiba ay lacag timaado in lagu dayactiro ama lagu qalabeeyo. Lacagtaan waxay ahayd in kuwaas lagu dayactiro oo looga dhigo xafiisyo shaqeynaya haddii ay tala dowladeed tahay balse waa talo si gaar ah loo maamulay oo ay wateen dad gaar ahi. Sidoo kale waa in wax laga weydiiyaa Safiirka Somaliya u jooga Washington sida ay arrimahaan ku dhaceen iyo cidda hawshaan gacanta ku haysay.
Wararka waxay sheegayaan inay guriga hawlahiisa ay waday Yusur Abraar oo ka wakiil ah adeerkeed Beyle oo ku gabaneysay gabar la dhalatay oo ka shaqeysa hawlaha iibinta guryaha, safaaraddana la shaqeysa. Labadaan Gabdhood oo uu adeer u yahay wasiirka Maaliyadda hawshaan waday. Yusur Abraar shakhsigii dhaawaca xun uu geystay dalka Somaliya markii loo dhiibay Bangiga dhexe, kana been sheegtay hawlaha maaliyadda Bangiga.
Halkaan ayaa kaga bogan kartaa hawlaha qarsoon ee ay Yusur iyo Beyle isla qabteen kuna xalaashadeen malaayiin doolar oo shacab dhiban laga dhacay.
Sidoo kale halkaan ka arag qiimaha uu suuqa ku yaallay gurigaas oo lagu beecinayey iyo kan looga gaday Shacbiga Somaliyeed si musuq Maasuqa loola dagaalo.
Previous articleWAXA SOCDA SOO MA AHAN LABA SHABAAB INEEY WADA SHAQEEYAAN SHAKI KUMA JIRO SHABAABKII IYO DOWLADII WEEY ISKU MILMEEN
Next articleDaawo Afar Xisbi Siyaasadeed oo Isbaheysi Muqdisho kaga dhawaaqay